Abakhiqizi nabahlinzeki be-Blackout - I-China Blackout Factory
Indwangu Yedube Eyenziwe Ngokwezifiso Eyimfashini Eyimpumputhe 100% I-Polyester
Ama-Zebra blinds, aziwa nangokuthi ama-rainbow blinds, ama-dimming blinds, ama-roller blinds, ama-day and night blinds, njll., adabuka e-South Korea futhi adume kakhulu emhlabeni jikelele.
Inomuzwa onamandla wezinhlangothi ezintathu futhi ifudumele kakhulu. Kuwuhlobo lwendwangu aluhlanganisi kuphela izinzuzo zendwangu kanye ne-mesh, kodwa futhi luhlanganisa imisebenzi yama-venetian blinds, ama-roller blinds nama-Roman blinds.Isetshenziswa kabanzi ezindlini, emahhotela, ezindaweni zokudlela, ezindlini zama-villas, izakhiwo zehhovisi ezisezingeni eliphezulu nezinye. izindawo. Sinesipiliyoni seminyaka engaphezu kweyi-16 sokwenza indwangu yedube enhle nesezingeni eliphezulu.
Imfashini Isitayela Esisha Idube Iwindi Roller Impumputhe Indwangu 3m Ububanzi
Idube I-Window Roller Izimpumputhe Indwangu
Izimpumputhe ze-Zebra window roller, ezaziwa nangokuthi ama-zebra blinds, ama-dimming blinds, ama-roller blinds, ama-day and night blinds, njll., adabuka e-South Korea futhi adume kakhulu emhlabeni jikelele.
Ububanzi bendwangu ye-zebra roller blinds yi-3m, futhi impahla iyi-polyester engu-100%. Ukugcinwa kanye nokuhlanzwa kwendwangu ye-Groeve zebra blinds injengoba ngezansi:
4. Sula ukuhlanza ukufeza ukuhlanza okujulile, sicela usebenzise isicoci se-vacuum esinekhanda lebhulashi ukuze ukhiphe ngobumnene. Ungasebenzisa futhi isomisi sezinwele (esingasethwanga ekushiseni) ukuze ukhiphe uthuli emhlobiso wefasitela.
Duble Leya Izimpumputhe Indwangu
Ama-blind layer aphindwe kabili, aziwa nangokuthi ama-zebra blinds, ama-dimming blinds, ama-sheer blinds, ama-rainbow blinds, ama-blind blinds emini nasebusuku, ama-sheer blinds, njll., adabuka e-South Korea futhi adume kakhulu emhlabeni jikelele. Impahla yendwangu eyimpumputhe ephindwe kabili yi-polyester engu-100%.
Indwangu enezingqimba ezimbili ingalungisa ukukhanya ngaphandle kokuthatha isikhala. Ayihlanganisi kuphela izinzuzo zendwangu kanye ne-mesh, kodwa futhi ihlanganisa imisebenzi yezimpumputhe ze-venetian, izimpumputhe ze-roller kanye nezimpumputhe zamaRoma. Isetshenziswa kabanzi ezindlini, emahhotela, ezindaweni zokudlela, kuma-villas, ezakhiweni zamahhovisi ezisezingeni eliphezulu nakwezinye izindawo.
I-Sun Shades Adjustable Zebra Fabric Blackout
Ama-Zebra blinds, aziwa nangokuthi ama-rainbow blinds, ama-dimming blinds, ama-roller blinds, ama-day and night blinds, njll., adabuka e-South Korea futhi adume kakhulu emhlabeni jikelele. Indwangu ye-zebra yi-polyester engu-100%.
Indwangu yedube ingakwazi ukulungisa ukukhanya ngaphandle kokuthatha indawo. Ayihlanganisi kuphela izinzuzo zendwangu kanye ne-mesh, kodwa futhi ihlanganisa imisebenzi yezimpumputhe ze-venetian, izimpumputhe ze-roller kanye nezimpumputhe zamaRoma. Isetshenziswa kabanzi ezindlini, emahhotela, ezindaweni zokudlela, kuma-villas, ezakhiweni zamahhovisi ezisezingeni eliphezulu nakwezinye izindawo. Kuyisinqumo esingcono kakhulu sokugcina ubumfihlo nokulawula ukukhanya.